मंगल ग्रहको सतहमा पुग्यो रोबोर्टसहितको यान, खुल्ला त अर्बौं वर्ष पुरानो राज ? - Makalukhabar.com
मंगल ग्रहको सतहमा पुग्यो रोबोर्टसहितको यान, खुल्ला त अर्बौं वर्ष पुरानो राज ?
मकालु खबर	 मङ्गलबार, मङ्सिर ११, २०७५ १६:४३ मा प्रकाशित
मंसिर १०, काठमाडौँ । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले मंगलग्रहमा जीवको सम्भावना, यसको उत्पति, पृथ्वीसँगको समानता र यस मार्फत् सौर्यमण्डलको थप जानकारी लिने उद्देश्येले पठाएको रोबोर्टसहितको अन्तरिक्ष यान इनसाइट मंगल ग्रहमा पुगेको छ ।
अन्तरिक्ष यान इन्साइट ल्यान्डर नेपाली समयानुसार मंगलबार राती करिब पौने दुई बजे मंगलग्रहमा पुगेको हो । मंगल ग्रहका लागि पठाइएको यो नयाँ रोबोटले सात मिनेटमा ल्यान्डिङ गर्यो ।
नासाको इन्साइट मिशनको लक्ष्य मंगलको जमिन र आन्तरिक भागको अध्ययन गर्नु हो र पृथ्वीबाहेक यो एक्लो ग्रह हो जसको नासाले यस्तो अध्ययन गर्दैछ ।
यसको ल्याण्डिङको क्रममा सात मिनेट निकै तनावपूर्ण बित्यो । उक्त यानले चरणबद्ध रुपमा धर्तीमा सन्देश पठाइरहेको थियो । क्यालिफोर्नियामा रहेको नासाको यो मिसन कन्ट्रोल गर्ने जेट प्रोपुल्सन ल्याबुरेटरी (जेपिएल) मा रोबोर्ट मंगल ग्रहमा अवतरण भएको खुशीयाली मनाईएको छ । नासाले यो दिन उत्कृष्ट रहेको बताएको छ ।
रेड प्लानेटको सतहमा पुगेको इनसाइट ल्याण्डर यानको रोबोर्टले ग्रहको भित्री क्षेत्रका बारेमा अध्ययन गर्नेछ । पृथ्वीपछि पहिलोपटक अरु कुनै ग्रहको यस्तो अध्ययन हुन लागेको हो ।
उक्त यान एलिसियम प्लानिशिया नामको समथर मैदानमा अवतरण भएको छ जुन यो रातो ग्रहको भूमध्य रेखा नजिक छ ।
अहिलेका लागि वैज्ञानिक यो यानमार्फत वरिपरिको जानकारी र तस्बिरको प्रतिक्षा गरिरहेको छ । यी सबै जानकारी केही घण्टाभित्र धर्तीमा आउने सम्भावना छ ।
मंगलमा अवतरणका लागि सात मिनेट निकै महत्वपूर्ण मानिएको थियो । यसका लागि यानले आफ्नो गती २० हजार किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म कम गर्नुपर्दथ्यो । इन्साइटले मंगल ग्रहबारे यस्ता जानकारी दिनसक्छ जुन अर्बौं वर्षदेखि पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
आफ्नो अभियानको क्रममा यो यानले मंगलग्रहमा एउटा साइज्मोमिटर राख्नेछ जसले यसभित्रको हलचल रेकर्ड गर्नेछ । यसले मंगल ग्रहभित्र भूकम्पजस्तो कुनै हलचल हुन्छ कि हुँदैन भनेर पत्ता लगाउनेछ ।
यो पहिलो यान हो जसले मंगलग्रहलाई खनेर यसबारे रहस्यमयी जानकारी जुटाउनेछ । साथै, एक जर्मन उपकरण पनि मंगल ग्रहको जमिनको पाँच मिटर मुनी गएर तापक्रमबारे जानकारी दिनेछ । ग्रहको यो तापक्रममार्फत मंगल अहिले पनि कति सक्रिय छ भन्नेबारे पत्ता लाग्नेछ ।
सूर्याेदयले ५० प्रतिशत हकप्रद प्रस्ताव गर्दै
आग्लो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् फरार